कस्तो कलियुग ! बे’होसीको औषधी दिएर छोरो बला’त्कार गर्ने, आमा भिडियो बनाउँने - Nepal Insider
Home/समाचार/कस्तो कलियुग ! बे’होसीको औषधी दिएर छोरो बला’त्कार गर्ने, आमा भिडियो बनाउँने
काठमाडौं । कुनै घटना सुन्दापनि कुनै फिल्ममापनि नबनाईएको कथाबस्तु जस्तो । जो नैतिक समाजले कहिलैपनि कल्पनापनि गर्न नसक्ने घटना भइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय समाजमा बला’त्कार जस्ता ज’घन्य अप’राधका घटनाहरु बढ्दै जान थालेका छन् । अहिले हामी लेखिरहेको खबरले सबैलाई अचम्बित मात्र हैन झ’स्किने बनाउँनेछ ।
किनकी यहाँ बला’त्कार मात्र भएको छैन । त्यो घटनामा खुलेको भित्री रहस्यले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । घटना भारतको छत्तीसगढ़को राजधानीबाट केही माईल टाढाको जिल्ला बलौदा बजारको हो । आरोपीको परिवारले उनलाई सिम्गा जिल्लामा भएको घटनामा सहयोग गरेको खुल्न आएको छ ।
महिलालाई ब्ल्या’कमेल गरेर उनीबाट लाखौं रूपैयाँ बरामद लिइएको खुलासा भएको छ । उक्त अभियुक्त युवकलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ । छानबिन पछि यस मुद्दाका अन्य आरोपितहरुलाई पनि पक्राउ गरिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आरोपित युवाको बयान लिइएको छ ।
इन्चार्ज सीआर चन्द्राले भने कि चम्पा निवासी २० वर्षीय सिम्गा पुलिस चौकी मनीष बर्लेले उनलाई प्रेमको जालमा फ’साएका थिए । उक्त महिलाको विश्वास जितेपछि उनले आफ्नो घरमा बोलाए । आरोपीकी आमा शकुनले युवतीलाई खानामा बे’होस हुने औ’षधी दिएकी थिइन् । केही समयपछि केटी बे’होस भइन् । यसको फाइदा उठाउँदै आमा कै अगाडी आरोपीले बला’त्कार गरे । घटनाको भिडियो आरोपीको आमाले बनाएकी थिइन् ।
आमा छोराका नाममा यति क’लंकीत पात्रपनि यो भूगोलमा छन् भन्ने खबर आउँदा कसलाई झ’स्का नपस्ला र । तर पिडापछि फेरी अर्को घटना घट्यो । आमाले खिचेको भिडियोबाट आमा छोरा भएर पिडित युवतीलाई ब्ल्या’कमेल गर्न थाले । उनले त्यही जा’लबाट ४ लाख रुपैयाँ उनीहरुलाई बुझाईन् ।
केटीको बुबाले केही समय अघि पेन्ड्रा रोडमा उनको जग्गा ६ लाखमा बेचेका थिए । यो रकम उनले छोरीलाई राख्न अनुमति दिइएका थिए । आवश्यक परेको खण्डमा बुबाले पैसा मागे । गणनामा यो पत्ता लाग्यो कि ४ लाख रूपैयाँ कम छ । बाबुले यसबारेमा जान्न खोज्दा ति युवतीले घटनाबारे आफ्नो बुबालाई बताइन् ।
पीडित महिलाले भनिन् कि आरोपितले ध’म्की दिएका कारण उनीहरुलाई किस्तामा ४ लाख रूपैयाँ दिएकी थिइन् । यसपछि यो कुरा प्रहरीमा पुग्यो । अनि मात्र यो घटना बाहिर आयो । अहिले यो घटना भारतका हरेक मिडियामा आइरहेको छ
यी नै हुन् १२ वर्षअघि ‘बिहे गर्न नमान्दा’ सुनिताकाे विभ*त्स ह*त्या गर्ने राजेश लामा
रवि लामिछानेको लक्ष्य एक करोड जित्ने